IMOZULU YENDAWO YE-BAY: IZAQHWITHI EZINAMANDLA NGAKUMBI ELUNDINI EMVA KOMBONISO OBUTHATHAKA WOKUQALA - IINDABA
Imozulu yendawo ye-Bay: Izaqhwithi ezinamandla ngakumbi elundini emva komboniso obuthathaka wokuqala
Esona saqhwithi sinamandla kulindeleke ukuba sifike ngeCawa ebusuku kwaye siqhube ngoMvulo.
Eyokuqala kweenkqubo ezintathu zemozulu emanzi ekulindeleke ukuba iqengqeleke kwiNdawo yeBay ishiye inqaku ngoLwesibini ebusuku nangoLwesithathu kusasa ingabonakali kakhulu kuneeNkonzo zeMozulu zeSizwe ezilindelekileyo.
Nangona kunjalo, banethemba lokuba kuninzi kusendleleni - ukuba akuveli ekupheleni kwenkqubo yokuqala ngolwesiThathu ebusuku, emva koko ezimbini ezilandelayo zithembisa ukuba zibaluleke kakhulu.
Yayiyinto eyothusayo leyo, isazi ngemozulu kwiNkonzo yeMozulu yeSizwe uJeff Lorber uthe malunga nokunyuka kokuqala kwenkqubo yokuqala eyalahla ikota yesithathu ye-intshi eSanta Rosa, kwaye malunga namakhulu amane e-intshi kwiindawo zaseMarin County kodwa hayi kakhulu. ngakumbi ngobusuku.
Kodwa izigaba zokugqibela zenkqubo zaphakamisa inani elipheleleyo kwiindawo zeMarin County ukuya kwi-intshi enye nge-2:30 p.m. ngolwesithathu. Igeyiji yemvula nayo yazalisa ukuya kutsho kwisine seshumi se-intshi e-Oakland; .23 intshi kwiNtaba yeDiablo neLoma Prieta kumda wengingqi yaseSanta Clara neSanta Cruz; kunye .17 intshi e Richmond kwintshona Contra Costa County.
Imvula ekhaphukhaphu kunye nevalayo ihlala ikuqikelelo kwiiyure ezizayo ezingama-24 kufutshane nedolophu yaseSan Francisco.
Indawo ebandayo esecaleni iza kuzisa enye imvula ngentsasa yangoLwesihlanu.
Eyona mvula inamandla ke kulindeleke ukuba iqale emini ngeCawe ukuya kutsho ngoMvulo (ngaphaya kwetshati). pic.twitter.com/3LJtlQ9U47
-NWS Bay Area (@NWSBayArea) Nge-20 kaOkthobha, 2021
Olunye uqikelelo lubize ukuya kuthi ga kwisiqingatha se-intshi eSan Francisco ngolwesiThathu ebusuku ukuya kutsho ngoLwesine ekuseni kunye nesinye isine seshumi se-intshi e-Oakland ngexesha elinye. Iimvula zemvula zinokuwa ngamaxesha angoLwesithathu ebusuku eSan Jose nakwezinye iindawo zaseSouth Bay, kunye naseConcord nakwezinye izixeko ezikude zase-East Bay.
Ukususela ngo-5:15 p.m. NgoLwesithathu, imvula yeeyure ezingama-24 iquka i-intshi ze-1.32 eSanta Rosa, .63 intshi eSan Rafael, .06 intshi eSan Francisco, .03 intshi eHalf Moon Bay, .02 intshi eConcord kunye .01 intshi eGilroy, ngokutsho inkonzo yemozulu. Izixa zomkhondo zarekhodwa eHayward, eLivermore naseSan Jose.
OAKLAND, CA - OKTOBHA 20: Umntu uthatha uhambo ecaleni kweLake Merritt njengoko iimvula ezilula ziwela e-Oakland, Calif., NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021. Izivunguvungu ezinamandla zilindeleke ukuba zihlasele i-Bay Area kule mpelaveki, ngokutsho kweMozulu yeSizwe. Inkonzo. (Ray Chavez/Bay Area News Group)
U-Lorber uthe ezinye iishawa ezilula zinokulandelwa lutyhala olunzima njengoko inkqubo yokuqala iphuma kummandla kwaye ababikezeli baqikelele ukuya kuthi ga kwikota ukuya kwisiqingatha se-intshi yemvula enokuna kwiindawo zeContra Costa, Alameda kunye neSanta Clara. .
Esona sitshingitshane sinzima siseza kufika iintsuku, utshilo. An umlambo we-atmospheric - isiqhwithi esincinci esinomswakama obuninzi - sithathwa njengenkqubo yeCandelo le-5 ngoLwesibili, inqanaba eliphezulu elinokwenzeka. Eso saqhwithi kulindeleke ukuba sibethe ngeCawa ebusuku kwaye siqhube ngoMvulo, utshilo uLorber.
Kusekho ukungaqiniseki apho ukufuma buza kuhambelana ngokuchanekileyo, utshilo uLorber. Kodwa silindele ubuncinci ngaphezulu kwe-intshi kwaye kunokwenzeka ukuya kuthi ga kwi-intshi ezintlanu kwezinye iindawo, kuxhomekeke kwindlela eyithathayo. Lowo iya kuba sisiganeko sokuna kwemvula ngokubanzi.
OAKLAND, CALIFORNIA – OKTOBHA 20: Umhambi ngeenyawo udlula eludongeni njengoko imvula encinci inetha eChinatown kumbindi wedolophu yase-Oakland, eCalif., NgoLwesithathu, Okt. 20, 2021. (Jane Tyska/Bay Area News Group)
Isandulela sale nkqubo sesinye ekulindeleke ukuba sityhale ummandla kude kube ngoLwesine ukuya kutsho ngolweSihlanu kusasa, utshilo uLorber. Kwakhona, iNorth Bay iya kubona isambuku saloo mvula - uLorber uthe ezinye iindawo zaseNorth Bay ziqikelelwa ukuba ziya kufumana ukuya kuthi ga kwi-intshi ezi-2 - kodwa ummandla osembindini kunye noMzantsi Bay nazo zinokufumana ubuncinane ikota-intshi kwaye njengoko. kakhulu njengesiqingatha-intshi, ngokutsho kwababikezeli.
Eso siganeko sinenkangeleko yomlambo osemoyeni, ababikezeli batsho, nangona ungenamandla njengalowo bekulindeleke ukuba ufike ngeCawa.
Abakhenkethi bayonwaba njengeekhilogram ze-surf enzima eSanta Cruz County kunxweme
Kwiminyaka kamva, itikiti lakhe lokuyilungisa liyamkhathaza: Umboniso wendlela
Iinyawo ezi-2 zekhephu eSierra; bhala imvula eReno; I-80 iphinda ivule
Isiphelo somsila wesaqhwithi esinamandla esisuka kumantla atyhutyha iindawo zaseMazantsi eCalifornia
Isaqhwithi somlambo we-atmospheric: Siyichaphazela njani imbalela yaseCalifornia
Amagosa omlilo kunye nababikezeli banethemba lokuba izivunguvungu ezintathu zinganciphisa kakhulu ingozi yomlilo kulo lonke elaseNyakatho yeKalifornia, njengoko zinokwenza iingxaki ze-mudslide kwiindawo apho amadangatye akrazule izityalo kwiiveki zakutshanje.
Iindawo ezikufutshane noMlilo weDixie kwiNtaba yaseLassen kunye noMlilo waseCaldor eSouth Lake Tahoe zisengozini kakhulu, amagosa athi.
Umbhali wabasebenzi uPaul Rogers ufake isandla kweli bali.
OAKLAND, CA - OKTOBHA 20: Izakhiwo zaseLakeside Drive zibonakaliswe kwiLake Merritt njengoko iimvula ezikhanyayo ziwela e-Oakland, Calif., NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021. Izivunguvungu ezinamandla zilindeleke ukuba zihlasele i-Bay Area kule mpelaveki, ngokutsho kweMozulu yeSizwe. Inkonzo. (Ray Chavez/Bay Area News Group)